Tag: qoryooley | Sagal Radio Services
Suuqii degmada Qoryooley oo xalay gubta iyo Maamulka oo arrintaa ka hadlay
Suuqii degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa gabi ahaantiis xalay gubtay, iyadoo guddoomiyaha degmadaas oo ka hadlay dabkan inuu yahay mid ay ka dambeyso Xarakada Al-shabaab.
R/W C/weli oo gaaray Qoryooleey & Al Shabaab oo sheegay inay Wafdigaasi weerareen
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheikh Axmed Maxamed iyo wafdigii uu hogaaminayay ee ku sugnaa Magaalada Marka ayaa maanta waxaa ay gaareen Degmada Qoryooleey ee Gobolka Sh Hoose.
Ra’iisul Wasaarada Somalia iyo wafdigiisa oo Saaka ku wajahan Qoryooleey
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Sheekh Axmed Maxamed iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo ku sugnaa xalay Marko ayaa lagu wadaa inay maanta gaaraan degmada Qoryooley oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, halkaasoo dhawana ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM la wareegeen.
Ciidamada Dowladda iyo Xoogagga Al-shabaab oo ku dagaalamay Qoryooley
Sagal Radio Services • News Report • May 5, 2014
Ugu yaraan siddeed qof oo dhinacyadii dagaalamay ka mid ah ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen dagaal ku dhexmaray gudaha degmada Qoryooley ciidamada dowladda Somalia iyo kuwa AMISOM oo dhinaca ah iyo xoogagga Al-shabaab.
Ciidamo Boolis iyo Nabadsugid oo la geeyay degmada Qoryooley
Ciidamo Boolis iyo Nabadsugid ayaa la geeyay degmada Qoryooley ee Gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasoo todobaadkii hore ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Al-Shabaab oo sheegay inay gooyeen jidadkii sahayda u marayay Qoryooley
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay jartay jidadkii soo galayay degmada Qoryooley oo maalmo ka hor laga qabsaday, iyadoo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee ku sugan degmadaas ay wali wajahayaan weeraro.
Waa sidee xaaladda Qoryoley oo shalay laga qabsaday kooxda Al-Shabaab?
Sagal Radio Services • News Report • March 23, 2014
Xaalada Degmada Qoryooleey ee Gobalka Shabeelaha hoose, ayaa saaka degan, halkaasi oo shalay ay gacanta usoo gashay ciidamada Dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
War Dag Dag ah:Dagaalo ka qarxay meel aan sidaasi ugu fogeen Qoryooley oo saakay ay weerareen Ciidanka Dowlada iyo Amisom.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo is-bahaysanaya ayaa saaka aroortii duullaan ku qaaday degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose oo ka mid ah degmooyinka ay maamusho Al-shabaab.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo kaabiga u saaran degmada Khoryooley ee Gobolka Sh/Hoose
Ciidamada huwanta oo ku hubeysan gaadiidka gaashaaman ayaa kaabiga u saaran degmada Khoryoole, kadib markii ay gaareen duleedka degmadaas, waxaana socda diyaar garowgii u dambeeyay oo ay ku doonayaan inay in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan.